Hernán Crespo oo kala doortay xiddigaha Griezmann iyo Martínez – Gool FM
(Yurub) 03 Maajo 2020. Weeraryahankii hore kooxda Inter Milan iyo xulka qaranka Argantina ee Hernán Crespo ayaa doortay kan fiican xiddigaha Lautaro Martínez iyo Antoine Griezmann.
Inter Milan ayaa lala xiriirinayaa inay kala soo wareegeyso Barcelona weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann, iyadoo Lautaro Martínez u dhaqaaqi doono garoonka Camp Nou.
Antoine Griezmann ayaa u sheegay dhawaan majalada “France Football” ee dalka France:
“Kuwa aan ugu jeclahay ciyaartoyda haatan? waxaa jira Lionel Messi iyo Cristaino Ronaldo, waxay ku jiraan qaab ciyaareed ka duwan kuwa kale.”
Laakiin halyeeyga Hernán Crespo ayaa doorbiday hadalka Antoine Griezman wuxuuna yiri:
“Waxaa jirta ciyaartooy aan aad u jeclahay, sida Robert Lewandowski, Karim Benzema, Luis Suarez, sidoo kale waxaa jira kuwa waxoogaa sarre u soo kacay, sababa la xiriira qiimaha ay ugu wareegeen kooxdooda cusub, sida Antoine Griezmann.”
“Griezmann waa ciyaaryahan cajiib ah oo caqli badan, wuxuu ku guuleystay Koobkii Adduunka wuxuuna heystaa qaab cajiib ah oo lagu fahmi karo kulamada, laakiin Barcelona kuma sameynin qaab ciyaareedkiisa ugu fiican.”
“Antoine Griezmann runti waa mid cajiib ah, laakiin waxaan jeclahay Lautaro Martínez, sidoo kale ma iloobin Sergio Aguero iyo Gonzalo Higuain.”